Isikhangiso, Wangaphambi kokunyathelisa
Kumabonakude, emsakazweni, lapho sihamba emigwaqweni nalapho esikhathini zommbila nsuku zonke sibona nedlanzana ukukhangisa ezimbalwa, ositshela mayelana nomkhiqizo noma isevisi. Engaqondile noma ngenjongo, kodwa sibonga le ndlela abantu bezokuxhumana abe lezimpahla.
Wathi igama ezisusela olimini lwesiLatin kusho "ungamemezela" noma "ukukhala", futhi ilapho-ke okushiwo yokukhangisa - ukukhuluma into ngaphandle kwemvume isilaleli. ukukhangisa Outdoor noma zasendlini - lena ulwazi mayelana nomkhiqizo, umdayisi, umsebenzi lohleliwe noma umcimbi. Ngenxa ukuxhumana mass sekuyindlela injini kwezohwebo, futhi ukhokho yayo - udokotela French futhi intatheli uTheophrastus Rondo, owaqala watshela ngaye cindezela.
Uyini ukukhangisa yangaphakathi: amafomu
Wonke umuntu waphawula izikhangiso ikheshi, emahhovisi, isikhungo imfanelo, futhi ngokungazi afinyelela eziphethweni ezingase ukuthola izimpahla noma ukusizakala isevisi ahlinzekwa. izikhangiso ezinjalo zibizwa ngokuthi ama yangaphakathi, noma zasendlini ezokukhangisa.
umsebenzi Its main - ukuze zidonse ukunaka kwanoma abathengi ezingaba kwezimpahla nezinsiza, kodwa ukwenza kube ukusebenza, kubalulekile kahle beka lapho umuntu echitha isikhathi esiningi. Ngokwesibonelo, ukuhamba kwezithuthi zomphakathi, thola ithikithi, esemgwaqweni ngemuva ukukhangisa noma ogibele ikheshi, futhi kuqhakambisa ulwazi kanye sifunde ngezinsizwa ezithile izinkampani.
Nokho, ukukhangisa yangaphakathi zingahlukaniswa zibe esitolo (onikeza ulwazi mayelana nemikhiqizo kanye ukukhushulwa ukuze iphuzu elithile ukudayiswa) kanye nokukhangisa ezindaweni zomphakathi, okungase ngokuphelele unolwazi mayelana imikhiqizo ehlukene.
Isitolo ngosizo pos-izinto bathambekele ezidonsela ukunakekela imikhiqizo ukuthi ufuna ukuthengisa ngokushesha futhi ivelele phakathi izimbangi, t. E. Ukuze sikhuthaze isinqumo ukuthenga. Abathwali esemqoka lapha yilezi:
Design isethulo uhlamvu (Racks, imele, ngokunambitha amathebula).
isakhiwo Kumisiwe - Mobiles (izakhiwo umkhiqizo), dummies noma ukudla okuhlukahlukene (Ithebula nemidwebo enamathiselwe eshalofini nge imilenze nezimo plastic).
Ukuphrinta ukukhangisa - amaphosta, amapheshana, izitika, amafulegi.
Ukukhangisa ukuchayeka esitolo wenza imisebenzi efana ekwazisa ikhasimende mayelana nomkhiqizo, ujwayele ikhwalithi izici umkhiqizo kanye isikhumbuzi imikhiqizo ehlobene.
Ukukhangisa ezindaweni zomphakathi
ukukhangisa Indoor akuyona kahle, futhi ngezinye izikhathi ngisho nangokwengeziwe ezuzisayo, njengoba akubhekwa awayiphazamisi, ngokuvamile ecasulayo labo abangase babe abathengi. Isibonelo esihle yokukhangisa ubhekwa ikheshi, lapho ukwazi ukwemboza cishe 100% of target yayo izilaleli. Ngaphezu kwalokho, i-inani ezinikezwa ungathathi ukukhokhiswa okungaphezulu kokufanele, njengoba, ngokwesibonelo, ku-TV noma umsakazo, kukhona kuphela elikhokhelwa ngesikhathi lapho ukukhangisa nokunensa ku amatekisi, ku-pizza, yokuxhuma Inthanethi nomabonakude - konke kuyadingeka ukuze umuntu yonke into ikhaya kanye nezidingo.
Kodwa kubalulekile ukuba uchithe isikhathi esiningi asathuthuka lokhu ukukhangisa ukuthi kungaba nesithakazelo kumuntu, uyakwazi ukuba abe iklayenti. Itheksthi kumele ibe emfushane, ukucinga indikimba yendaba elikhanyayo, kodwa hhayi okunyanyekayo - umuntu kufanele ngokushesha wasithatha okushiwo kulokho okushiwoyo, kunokuba kabusha funda izikhathi eziningana. Qiniseka nokutholakala bonke othintana nabo, ukuze iklayenti unethuba ngokushesha shayela.
Yini enye unendlela yokukhangisa kwangaphakathi, futhi lapho kungatholakala? Kudonse umthengi kungaba lapho elinde okuthile, isibonelo, emgqeni ebhange noma ehlezi umtholampilo. Khona-ke wajabulela ukuhlola konke ukwaziswa okukhona phambi kwamehlo futhi mhlawumbe ukusizakala ke bayothenga lowo mkhiqizo. Into esemqoka ukuthi isikhangiso sasingase efanele.
Ngakho, amabhange ukuthumela ulwazi mayelana nemikhiqizo yabo: mortgages, ukubolekisa, imali kanye yokufuna debit nama-credit card. Ngo izibhedlela, ukuthumela ulwazi mayelana izidakamizwa, kodwa, isibonelo, ukuqina izikhungo, ukukhangisa kungaba hhayi kuphela inhliziyo, kodwa futhi ahlobene imikhiqizo ezemidlalo esitolo esithile, ngawo kukhona ukubambisana.
Ngaphambi kokuba unqume, ngosizo abanye ukukhangisa zokusakaza ulwazi ngabo, kuyafaneleka izimfanelo zayo kanye nobuthakathaka, bese ukhetha nomkhiqizi ukukhangisa ongaphandle kanye zasendlini.
Ake sihlaziye izinzuzo zokukhangisa ongaphandle:
umthelela izethameli eziqondiwe;
contact eside futhi ngokuphindaphindiwe namaklayenti ezingase zivele;
Akukona obulimaza amakhasimende;
Inikeza ithuba ukukwazisa mayelana ukukhuphula kanye Izipesheli.
Ngakho, ukukhangisa ezindaweni zomphakathi noma ezokuthutha uyakwazi ukwandisa ulwazi ngomkhiqizo futhi kuqinise yokuthengisa kwezimpahla noma amasevisi.
Njengezinye zilwane, ukukhangisa zasendlini has izinzuzo engenhla, nebubi baqaphe umkhangisi ngamunye. Imithetho cishe akusho lokulawula lolu hlobo lwesikhangiso, kodwa lokhu has hhayi izinzuzo kuphela kodwa nobubi obuthile:
Into esemqoka ukuthi uma ukukhangisa akathandi, njengemoto isikhungo imfanelo, inkampani isevisi noma umphathi wehhovisi, ke ngeke zitholakale futhi isizathu ngeke kutholakale.
Kunzima kakhulu ukubala, kanye nokusebenza ukukhangisa ezifana: bangaki abantu ababone mayelana nolwazi umkhiqizo ikheshi, weza ngenjongo ukuthenga noma bangaki abantu baye bathola ukuthi kuhlulekile.
Kuzo zonke izindawo zomphakathi intengo nokubekwa kwezimo amiswa ukulawula indawo, futhi ibizwa nangokuthi cha kulawulwa ubani.
ukukhangisa Indoor: isithombe bese isibonelo
Ukuqonda indlela ukukhangisa kumele ibukeke kuza ngemuva sizoxoxa ngezibonelo yimpumelelo futhi ukwazi target yabo nezilaleli. Kusukela ngaleso sikhathi, futhi kufanele uqale. Udinga ukwazi ukuthi izethameli eziqondiwe okungukuthi, iziphi izinhlobo zokuzijabulisa ekhetha lapho ungakwazi ukuthenga izimpahla kanye uya lapho ezokuthutha zomphakathi.
Ngokwesibonelo, uthengisa imikhiqizo zezingane, okusho ukuthi izethameli eziqondiwe - omama abasebasha nezingane abathanda ukuthenga bese uya ikheshi izikhathi eziningana, njengoba behamba. Othile nakanjani ukusebenzisa futhi izithuthi zomphakathi, kodwa kubalulekile ukuba abale maphesenti ekukhangiseni zasendlini akangayiletha ukulahlekelwa.
Zothando - ngubani? Lapho izwi ubulokhu ukuthi kusho
Dala ukuziqhelelanisa lutho. ukuqonda sezenkolo futhi uNkulunkulu ukhona umuntu njengesidalwa "iphrojekthi"